क्यालेण्डर किन नबनाउने ? | eAdarsha.com
असार ८ गते २०७५
क्यालेण्डर किन नबनाउने ?
माननीय सांसद शारदा पौडेलज्यू
हामी कास्कीबाट देवरहरूका लागि आदरणीय शारदा भाउजू। यहाँको क्रियाशीलता देखेर हामी आभारी छौं। बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यक्रममा दौडिरहेको देखिन्छ। संसद् चलेका बेलामासमेत बैठक र भत्ताकोसमेत पर्वाह नगरी जनताको दैलोमा पुग्नु हुन्छ। जसले बोलाए पनि जहाँ भए पनि पुगी दिनुहुन्छ। यो र ऊ भन्ने भेदभाव पनि राख्नु हुन्न। कसैले सहयोगका लागि याचना गरे भने सहयोग पनि गर्नुहुन्छ। अरुको जस्तो उधारो होइन, तत्काल नगद प्रदान गर्नुहुन्छ। कार्यक्रममा बोलाउँदा हुन्छ, आउँछु भनिदिनुहुन्छ। नाई भन्ने शब्द शायद यहाँको शब्दकोश मै छैन। अति सरल, सहज, तपाईंको गुणको वर्ण गरी साध्य छैन। मैले धेरै थोरै मात्र व्यक्त गरें रिसानी माफ होला।
तर, माननीय सांसदज्यू, चार ठाउँका आयोजकले एकै पटक बोलाए पनि तपाईंले हुन्छ, आउँछु भन्नु हुन्छ रे। एउटा मान्छे चार ठाउँमा कसरी पुग्नु हुन्छ – तर पुग्नु हुन्छ रे सुन्दा पनि आर्श्चर्य लाग्छ। एकै दिन चार ठाउँमा प्रमुख अतिथि बन्नुभएको कुरा पत्रपत्रिकामा पढ्दा हामी द· पर्दछौं। चार वटा कार्यक्रममध्ये पहिलो कार्यक्रम त समयमा होला। तर बाँकी कार्यक्रम प्रमुख अतिथिको प्रतिक्षामा अस्तव्यस्त हुन्छन्। आयोजकलाई पनि तनाव, कार्यक्रममा आएका अरु अतिथि तथा सहभागीहरुको पनि समय बर्बाद। यसतर्फ यहाँको ध्यान गइदिए राम्रो हुन्थ्यो कि – यतिखेर बजारमा नयाँ वर्ष २०७४ का क्यालेण्डर छ्यापछ्यापी आएका छन्। यहाँले पनि आफ्नो दैनिक काम गर्ने विवरणसहितको क्यालेण्डर बनाएर सार्वजनिक गरिदिए कसो होला ?
– कृष्ण सुदामा, पोखरा-११, फूलबारी
स्वेच्छिक र अनिवार्य अवकाशमा अन्योल
अहिले निजामती सेवाका दुबैथरी अवकाशलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा, परिचर्चा चलेको छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका लागि चाहिने न्यूनतम कर्मचारीहरुसमेत नपुगेको गुनासो आइरहेको बेला कर्मचारीहरु सरकारले अघि सारेका नियम ,कानूनहरु एकपटक दोहोर्‍याएर हेर्न सरकारसँगै आग्रह गरिरहेका छन् । कर्मचारीलाई…
संसद्मा प्रतिपक्षस“गको अपेक्षा
प्रतिपक्षमा काँग्रेस संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न कालखण्डमा गठित अधिकांश सरकारको नेतृत्व गरेको हो, काँग्रेसले । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि सम्पन्न भएका सबै तहका निर्वाचनमा एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रने आँट गर्न नसकेपछि आफ्नो राजनीतिक धरातलभन्दा फरक पृष्ठभूमि बोकेका राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन गरी निर्वाचनको उपयोग…
सुशासन र समृद्धिका लागि सबल नेतृत्व
विश्वमा व्यवस्था बदल्ने अनुभूतयोग्य परिवर्तनका नियमित र आकस्मिक क्रियाकलापहरु कुशल र अब्बल नेतृत्वबाट नै संभब भएका छन्। चाहे त्यो रुसको वोल्शेभिक क्रान्ति होस, चाहे फान्सको राज्य क्रान्ति होस वा बेलायतको गौरबमय क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, भारत छोड आन्दोलन वा युरोपको औद्योगिक क्रान्ति…